Sunday October 22, 2017 - 20:19:52 in Wararka by Super Admin
Afhayeen u hadlay Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee marka magacooda loosoo gaabiyo loo yaqaan SDF ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu ay xaqiijiyeen gacan ku heynta magaalada Raqqa kadib dagaal bilo qaatay oo ay kula galeen xoogag Islaami ah.
Saraakiil katirsan Malaaxidada Kurdiyiinta ayaa wariyaasha geeyay fagaaraha weyn ee magaalada Raqqa iyo xarumaha maamulka oo laga dareemayay burbur xooggan oo kasoo gaaray dagaalladii xooganaa ee magaaladaasi martigelisay.
Raqqa oo muddo sedax sanadood ah ay maamulayeen xoogaga Ururka dowladda Islaamiga ayaa marti gelisay dagaal lagu baaba’ay, wariye katirsan Telefeshinka BBC-da oo magaalada booqday ayaa sheegay in kala barbar ay burbureen guryaha Raqqa iyo kaabayaasha magaalada kadib markii isbahaysiga Mareykanka ay sawaariikh casri ah ku burburiyeen guryaha shacabka.
in kabadan 3-kun oo shacab ah ayaa larumeysanyahay in ay ku dhinteen duqeymo bahalnimo oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay Raqqa, maleeshiyaadka isku magacaabay Ciidanka Dimuquraadiga Suuriya oo Kurdiyiin ubadan ayaa magaalada la wareegay waxayna taageero dhanka cirka ah ka helayeen isbahaysiga caalamiga ah ee Mareykanku Hoggaaminayo.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya dagaalka Suuriya waxay sheegeen in boqolaal dagaalyahan oo katirsan Ururka Dowladda Islaamiga ah iyo qoysaskooda si nabad gelya ah looga daad gureeyay Raqqa kadib wadahadal dhaxmaray Odayaal dhameedyo iyo isbahaysiga Mareykanku Hoggaaminayo.
Heshiiskan oo ay garwadeen ka ahaayeen odayaasha qabaa’illada ayaa dhigayay in dhammaan dagaalyahanada Suuriyaanka ah magaalada si nabad gelya ah uga baxaan balse waxaa ladiiday in dagaalyahannada Muhaarijiinta aan Suuriyaanka aheyn Raqqa ay ka baxaan.
Mas’uul u hadlay Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa wakaaladda Wararka Faransiiska u sheegay in dhammaan dagaalyanahaddii Muhaajiriinta ahaa ee diiday in ay isdhiibaan lagu dilay dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Raqqa.
Kurdiyiinta ayaa markii ay Raqqa qabsadeen waxay fagaaraha weyn ee Al-Nuceym waxay sureen sawirka Cabdalla Oojlaan oo Turkiga iyo Reergalbeedka ay ku dareen liiska waxa loogu yeero Argagaxisada.
Bayaan kasoo baxay xukuumadda dabadhilifka Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in Riyadh ay si diirran usoo dhoweynayso qabsashada Raqqa islamarkaana ay ka qeyb qaadan doonto dib udhiska mustaqbalka lagu sameyn doono Raqqa "Boqortooyada Sacuudiga si diirran ayay usoo dhoweynayaan in Argagaxisada Daacish laga saaro magaalada Raqqa ee dalka Suuriya, tani waa dhammaadka Xagjirayaasha” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Boqortooyada Sacuudiga.
Wasiirru dowllaha arrimaha Khaliijka uqaabilsan Sacuudiga Thaamir Sabhaan ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay Raqqa wuxuuna deegaanka Ceynu Ciisaa kula kulmay Mas’uuliyiin katirsan Maleeshiyaadka Kurdiyiinta sida ay qortay saxiifadda Okaz ee taageerta xukuumadda Sacuudiga.
Dowladda Sacuudiga ayaa noqotay dowladdii ugu horraysay ee caalami ahaan bogaadisa qabsashada Maleeshiyaadka Kurdida ee magaalada Raqqa marka laga reebo Jeneraallo katirsan melleteriga Mareykanka oo dagaalka Kurdiyiinta qeyb ka ahaa.
Dhinaca kale Calmaaniyiinta Kurdiyiinta iyo ciidamada Bishaar Al-asad ayaa dib ula wareegay gacan ku heynta magaalooyin katirsan gobolka hodonka ku ah shidaalka ee Deyruzuur, dad goob joogayaal ah waxay xaqiijiyeen in maleeshiyada SDF ay qabsadeen Ceelka Shidaalka Alcumar oo ah ceelka shidaal ee ugu weyn dalka Suuriya.
Sidoo kale Ciidamka Nidaamka Bishaar Al-asad waxay qabsadeen Ceelka Shidaalka Koniko oo ah ceelka 2-aad ee ugu weyn wadanka Suuriya, magaalada Almayaadiin iyo degmada Alsuur oo dhammaatood dhaca Bariga Suuriya ayaa ugacan galay dhinacyo cadow ah.
Xoogaga Dowladda Islaamiga ah ayaa la sheegay in ay isaga baxeen Ceelasha shidaalka Suuriya balse dhinacyada Kurdiyiinta iyo isbahaysiga Ruushka ayaa isku khilaafsan maamulidda dhulka baaxadda leh ee ay la wareegeen.
Sedax Sanadood ka hor ayaa nidaamka Bishaar Al-asad laga qabsaday Raqqa iyo gobolka Deyruzuur xilligaas oo kacdoonka hubeysan ee Suuriya ka socda uu xowlli ku socday balse sanado kadib ayay hadda dhinacyadaas cadawga ku ah sunniyiinta dib usoo karaar qaateen.